Ny terak'i Abraham - Church of God World Switzerland
lahatsoratra > Day-by-Day > Ny taranak'i Abrahama
Ny fiangonana no vatany ary miaina ao aminy tanteraka izy. Izay mameno ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra eo anatrehany (Efesiana 1:23).
Tamin'ny taona lasa, tsaroanay ireo izay nandoa sorona lehibe indrindra tamin'ny ady mba hiantohana ny maha-velona antsika amin'ny maha-firenena. Tsara ny mitadidy. Raha ny marina dia toa iray amin'ireo teny tian'Andriamanitra indrindra izy satria mampiasa azy matetika kokoa. Mampahatsiahy antsika hatrany Izy hahatsiaro ny fototry sy ny hoavintsika. Izany dia momba ny fampahatsiahivana antsika hoe iza izy ary ny fiheverany be antsika; Tiany ho fantatsika hoe iza isika ary tsy misy antony hahatsapantsika tsy fahatokisana, tsy mahomby ary tsy manan-kery; satria ananantsika ny herin'izao tontolo izao izay mitoetra ao anatintsika ho tenan'i Kristy; jereo ny soratra masina etsy ambony. Ity fanomezana herinaratra mahavariana ity dia tsy hoe miaina ao anatintsika fotsiny fa mizaha hery ho an'ny hafa. "Jn. 7:37 "Raha misy mino ahy, dia hisy onin'ny rano velona ao anatiny."
Saingy indrisy, amin'ny maha-olombelona antsika, adinontsika matetika izany. Eto amin'ny seho amin'ny fahitalavitra "Iza no tianao atao hoe iza?" mpandray anjara manana fahafahana hahafantatra ny razambentsika, hahafantatra azy ireo, ny fomba fiainany ary tena manan-danja na dia ny mahita ny sarinao. Izaho manokana dia manana ny sarin'ny vadiko, reniko, renibeko sy renibeko fa ireo sary ireo dia manambara amin'ny zanako ny reniko, renibeny, renibeny ary renibeny! Ary mazava ho azy, ny zanaky ny zana-badiny dia afaka mijery sambon'ny renibeny, renibeny, renibeny ary renibeny! Mampahatsiahy ahy ny fizarana iray ao amin'ny Soratra Masina izay efa nohadinoiko hatry ny ela.
Izaia 51: 1-2 «Mihainoa ahy, ianareo izay manenjika fahamarinana, izay mitady ny Tompo! Jereo ny vatolampy namboarinao sy ny lavaka fantsakana nolavinao! Jereo ange i Abrahama sy ny rainao ary i Sara izay niteraka anao! Satria nantsoiko ho olon-tokana izy dia notahiko sy nitombo azy.
Andeha isika hanao dingana iray fanampiny, mampahafantatra antsika i Galatianina 3:27 - 29 «Ianareo rehetra izay natao batisa ho an'i Kristy dia nahasarika an'i Kristy. Ny fanavahana ny jiosy sy ny Grika, ny andevo sy ny mpakafy, ny lehilahy sy ny vehivavy dia nanjavona - izy rehetra dia ao amin'i Kristy Jesosy. Ary raha an'i Kristy ianao, dia tena taranak'i Abrahama, tena mpandova ny fampanantenany. » Raha miverina kely amin'ny lahatsoratra isika ary mamaky ny andininy faha-6 - 7 dia lazaina amintsika: «Nino an'Andriamanitra izy ary nisaina ho fahamarinana izany. Koa fantaro: ny amin'ny finoana dia zanak'i Abrahama. » Matoky isika eto fa izay mino an'Andriamanitra dia tena zanak'i Abrahama. Eto dia nanondro an'i Dada Abrahama i Paul, ilay vatolampy izay nanoratana antsika ary koa mianatra lesona manokana momba ny finoana sy ny fahatokisana azy isika!
Dada Ray, misaotra anao papa rainy sy ny ohatra manokana nomeny ho anay. amena